Kusimaha Danjiraha Soomaaliya ee kuwait oo la kulmay Ardayda Soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay dalka Kuwait. – Radio Muqdisho
Kusimaha Danjiraha Soomaaliya ee kuwait oo la kulmay Ardayda Soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay dalka Kuwait.
Kusimaha Danjiraha Soomaaliya ee kuwait Abiib Muuse Faarax ayaa la kulmay Ardayda Soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay dalka Kuwait.
Mudane Abiib Muuse Faarax ayaa ardayda ka dhageystay warbixino la xiriira nolosha guud ee ardayda Soomaaliyeed ee deeqaha wax barasho ka helley wadanka Kuwait.
Danjire Abiib muuse farax ayaa kula dardaarmey ardaydaas in ay noqdaan kuwo lagu daydo hormuudna u ah ardayda kala duwan ee ay la noolyihiin, sidoo kelina ka qeybqaataan doorkooda ururka ardayda Soomaaliyeed ee kuwait.
Qaar kamid ah Ardeyda oo iyaguna goobta ka hadley ayaa Dowlada Soomaaliya iyo Dowlada kuwait u mahadceliyey, iyagoona ballan qaaday in ay fulin doonaan dhamaan dardaaranka uu u soo jeediyay ayna ku dadaali doonaan waxbarashada,kana mira dhalin doonaan.
Kulankan ayaa waxaa sidoo kale safiirka ku wehliyey xoghayaha koowaad ee Safaaradda Farxaan Gurxan iyo gudoomiyihii hore ee ururka Ardayda Soomaaliyeed ee kuwait Abdiraxman xaji shekh Maxamuud abdibari.
Kusimaha Ra’iisul Wasaaraha oo ka qeyb galay munaasabad uu xilka kula wareegay wasiirka cusub ee Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha+Sawirro